သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: ပုလင်းတစ်လုံးနှင့် ဘီယာနှစ်ဗူး
စာသင်ခန်းတစ်ခုရဲ့ရှေ့မှာ ပရော်ဖက်ဆာတစ်ယောက်က ဖန်ပုလင်းအလွတ်ကြီးတစ်လုံးနဲ့ရပ်နေတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီဖန်ပုလင်းကြီးထဲကို စားပွဲပေါ်က ဂေါက်သီးလုံးတွေတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးနဲ့ ပြည့်အောင်ဖြည့်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကျောင်းသားတွေကို ဖန်ပုလင်းက ပြည့်သွားပြီလားလို့မေးတယ်။ ကျောင်းသားတွေက ပြည့်သွားပြီလို့ ဖြေကြတယ်။
ပရော်ဖက်ဆာက ကျောက်စရစ်ခဲဗူးလေးတစ်ဗူးကို ကောက်ယူလိုက်ပြီး ခုနကဂေါက်သီးတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ ဖန်ပုလင်းထဲကို ကျောက်စရစ်ခဲလေးတွေ လောင်းချလိုက်တယ်။ ကျောက်စရစ်ခဲတွေက လွတ်နေတဲ့ နေရာတွေမှာ နေရာယူသွားကြတယ်။ ပရော်ဖက်ဆာက ကျောင်းသားတွေကို ဖန်ပုလင်းကပြည့်သွားပြီလားလို့ ထပ်မေးတယ်။ ကျောင်းသားတွေကလည်း ပြည့်သွားပြီလို့ ထပ်ဖြေကြတယ်။
ပရော်ဖက်ဆာက သူ့ခုံပေါ်ကသဲဗူးလေးကို ကောက်ယူလိုက်ပြီး ဂေါက်သီးတွေရယ်၊ ကျောက်စရစ်ခဲတွေရယ်နဲ့ပြည့်နေတဲ့ ပုလင်းထဲကို သဲတွေလောင်းထည့်လိုက်ပြန်တယ်။ သဲတွေက နေရာလွတ်တွေရှိသမျှမှာ တိုးဝင်သွားကြတယ်။ ပရော်ဖက်ဆာက ကျောင်းသားတွေကို ဖန်ပုလင်းက ပြည့်သွားပြီလားလို့ ထပ်မေးတယ်။ ကျောင်းသားတွေကလည်း ပြည့်သွားပြီလို့ ထပ်ဖြေကြတယ်။
ပရော်ဖက်ဆာက ထပ်ပြီး သူ့စားပွဲအောက်က ဘီယာဗူးနှစ်ဗူးကို ထုတ်ယူလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဖန်ပုလင်းထဲကို လောင်းချလိုက်တယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ကျောင်းသားတွေက ဘာမှမပြောတော့ဘဲ ရယ်မောလိုက်ကြတယ်။
အဲဒီမှာ ပရော်ဖက်ဆာက စကားအရှည်ကြီးစပြောတယ်။
မင်းတို့ရဲ့ ဘ၀ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အရာတွေကို ဂေါက်သီးလုံးတွေက ကိုယ်စားပြုတယ်။ ဥပမာ... မိမိရဲ့မိသားစု၊ မိမိရဲ့သားသမီး၊ ကျန်းမာရေး၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့လုပ်ချင်တဲ့အရာ (PASSION) တွေပေါ့။ ကျောက်စရစ်ခဲလေးတွေကတော့ ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်နိုင်တဲ့ အိမ်တို့ကားတို့။ သဲတွေကတော့ တခြားသိပ်ပြီးအရေးမပါတဲ့အရာတွေ။
တစ်ကယ်လို့ အရေးမပါတဲ့ သေးငယ်တဲ့ သဲမှုန်တွေကို ဖန်ပုလင်းထဲကို ထည့်မယ်ဆိုရင် ဂေါက်သီးလုံးတွေနဲ့ ကျောက်စရစ်ခဲတွေအတွက် နေရာကျန်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲလိုပဲ ဘ၀ထဲကို အရေးမပါတဲ့ သေးငယ်တဲ့ အရာတွေကို ထည့်ထားမယ်ဆိုရင် မိမိဘ၀ရဲ့ အရေးကြီးတာတွေအတွက် နေရာကျန်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး။
အရေးကြီးတဲ့ ဂေါက်သီးတွေကို အရင်ဂရုစိုက်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ပျော်ရွှင်မှု၊ စိတ်ချမ်းသာမှုကို ဦးစားပေးပါ။ မိမိရဲ့ ကလေးလေးတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းပါ။ ကိုယ့်မိဘတွေကို အချိန်ပေးပါ။ အဘိုးအဘွားတွေကို အချိန်ပေးပါ။ ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါ။ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ အချိန်ဖြုန်းပါ။ ဥပမာ..နှစ်ယောက်ထဲ ညစာထွက်စားတာတို့၊ နှစ်ယောက်ထဲ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်တာတို့ လုပ်ပါ။ အိမ်ရှင်းဖို့ ခြံရှင်းဖို့နဲ့ တခြားအလုပ်တွေကို လုပ်ဖို့အချိန်တွေ ရလာဦးမှာပါ။ ဘ၀မှာအရေးကြီးတဲ့ အရာတွေကို အရင်ဂရုစိုက်ပါ။
အဲဒီအချိန်မှာ ကျောင်းသားတစ်ယောက်က လက်ထောင်ပြီး ဘီယာကကော ဘာကိုကိုယ်စားပြုပါသလဲလို့ ပရော်ဖက်ဆာကို မေးလိုက်တယ်။ ဘ၀မှာ ဘယ်လောက်ပဲ လုပ်စရာတွေပြည့်နှက်နေပြီး အချိန်လုနေရကြရပေမယ့်လည်း သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်နဲ့တော့ ဘီယာသောက်ဖို့အချိန်ရှိတာကိုဆိုလိုတာ.... လို့ ပရော်ဖက်ဆာက ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။
သူငယ်ချင်းပို့ပေးသော အီးမေးကို အိမ့်ချမ်းမြေ့အတွက်... အိမ့်ချမ်းမြေ့မှ.. ဘာသာပြန်သည်။
If i m not wrong, ma 99 also had translated this post, i think.
i’ve read it before.
Comment by Thida — April 8, 2009 @ 11:39 pm
သီတာ.. ဂူဂဲလ်မှာ search words တွေနဲ့ရှာကြည့်တာတော့ မလေးပြန်ထားတာကလွဲပြီး မတွေ့ပေမယ့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်.. မလေးကတော့ ရုံးက သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ chain email တွေထဲကမနေ့ကမှရလို့ ရုံးမှာကောက်ပြီး ဘာသာပြန်လိုက်တာ.. ချိန်းအီးမေးလ်ကို ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဘာသာပြန်ခြင်းမို့ ထောက်နေလားတောင်မသိ.. မနိုင်းနိုင်းလိုတော့ ဘာသာပြန် မကျွမ်းကျင်ဘူး :)
Comment by မလေး — April 8, 2009 @ 11:50 pm
May be i was wrong, so sorry ma lay…
:D …i cannot imagine where did i read this. sorry for saying without making sure first.
Comment by Thida — April 9, 2009 @ 12:12 am
ပို့လေးလည်းကောင်း.. ဘာသာပြန်သူကလည်းကောင်း.. ဘာသာပြန်ထားတာကလည်းကောင်း.. ဘာမကောင်းတာရှိအုံးမလဲ..။
Comment by Phyo Evergreen — April 9, 2009 @ 12:14 am
Thida … no worries Thida… I’m not that sensitive.. ဆောရီးပြောစရာမလိုပါဘူးသီတာရယ်.. may be you are right :D
အမြဲစိမ်းဖြိုး.. မကောင်းတာလား.. မလေး ဂေါက်သီးတွေကို သိပ်ဂရုမစိုက်ဖူးဖြစ်နေတာကို ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်သတိပေးနေရတာပါပဲမောင်လေးရေ့
သီတာရော.. ဖြိုးရော.. မလေးအိပ်ပြီ.. ဂွတ်နိုက်နော်…
Comment by မလေး — April 9, 2009 @ 12:19 am
Thanks Ma…Good night
Comment by Thida — April 9, 2009 @ 12:22 am
အမရေ.. ဘီယာ သောက်ဖို့သတိရသွားပြီ။ :P
Comment by နေညိုရင့် — April 9, 2009 @ 12:28 am
ဒီနေ့အဖို့ တန်ဘိုးရှိတဲ့ အသိတစ်ခု ရလိုက်ပြီ။ ကျေးဇူး။
Comment byွှTTSweet — April 9, 2009 @ 8:55 am
If you read more… please visit to http://shwepyithu.blogspot.com ဆိုပြီး လေးမ ဆီကို Mayonnaisee ပုလင်းနဲ့ကော်ဖီ ( ၂ ) ခွက် ဆိုပြီး မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့ က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီက mail ရောက်လာပါတယ်..။ တစ်ယောက်ဘာသာပြန်ထားပြီးလို့နောက်တစ်ယောက် ဘာသာမပြန်ရဘူးလို့မရှိပါဘူး…။ လေးမကတော့ ကော်ဖီရော… ဘီယာရော နှစ်မျိုးလုံးသောက်လိုက်တာပဲ…။
Comment by layma — April 9, 2009 @ 10:09 am
ဒီဇာတ်လမ်းကို မြင်ဖူးနေတာ ကြာလှပါပြီ..
ဟိုးအရင် ဖတ်ဖူးတုန်းက ကော်ဖီ .. ဘီယာ မဟုတ်သေးဘူး =)
မလေးပြောတာ ဟုတ်တယ်. .ဂေါက်သီးက ပိုအရေးကြီးပါတယ်လေ..း-)
Comment by shwunmi — April 9, 2009 @ 10:32 am
Thida … Welcome Thida :)
နေညိုရင့် … ဂေါက်သီးအကြောင်းပြောနေတာ.. ဘီယာကို သတိရတယ်ပေါ့း))
ွှTTSweet … ဖတ်တာကျေးဇူးပါညီမရေ..
လေးမ .. တကယ်ဘီယာသောက်လား မလေးတော့ ခုထိခေတ်နောက်ကျတုန်း
ရွှန်းမီ နဲ့ လေးမ… မလေးတစ်ခုစဉ်းစားမိတယ်သိလား၊ ဂေါက်သီးနေရာမှာ သရက်သီး၊ ကျောက်စရစ်ခဲနေရာမှာ ဂေါ်လီလုံး၊ သဲ နေရာမှာ ဆားနဲ့ ဘီယာနေရာမှာ ငံပြာရည် ဆိုရင်ကော၊ ဘယ်သူနဲ့မှ တူတော့မှာမဟုတ်ဘူး… :D
Comment by မလေး — April 9, 2009 @ 2:08 pm
ကြိုက်သွားပြီ။ ဂေါက်သီးတွေနဲ့ချည်း ပြည့်နေတော့ရော ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။
Comment by ပုံရိပ် — April 9, 2009 @ 7:25 pm
မလေးမ ပြောမှ သတိရတယ်.. ဟုတ်ပ .. ဘာသာပြန်ရှိမှန်း ပြန်မေ့နေတာ..
မလေး ပြောသလို ဘာသာပြန်ရင် ဖတ်ရတာ ပိုအရသာရှိမယ် ထင်တယ်နော်..
သရက်သီးဆားစိမ်တောင် စားချင်လာပြီ . . . :-)
သရက်သီးရယ် ဇီးသီးရယ် ဆားရယ် နှင်းရည်ရယ် . . .
အဲ့လိုဆို ဂေါက်သီးပုလင်းထက် ပိုမိုက်မယ် ထင်တယ် .. :-P
Comment by shwunmi — April 9, 2009 @ 10:22 pm
လေးမ တကယ့် ဘီယာ မသောက်ပါဘူး.. မလေးရဲ့…။ ကော်ဖီ ရော.. ဘီယာပါ… ဘာဖြစ်ဖြစ် ဆိုလိုရင်း မပျက်လို့လက်ခံတယ်လို့ ပြောတာပါ..။ ငံပြာရည်ဆိုရင်တော့ လေးမ မသောက်ဘူးနော်.. ဒါပဲ… ငံပြာရည်ဆိုရင် ဟင်းအိုးထဲ ထည့်လိုက်မယ်..။
Comment by layma — April 10, 2009 @ 8:21 am
ပုံရိပ်.. အဲဒါဆို နဲနဲတော့ ဦးနှောက်ခြောက်မယ်ထင်တယ်
ရွှန်းမီ… မလေးလဲ ရွှန်းမီပြောမှ အရမ်းစားချင်သွားပြီ။ မလေးက ငယ်ငယ်က သရက်သီးတွန်းလှည်းကို သွားသတိရတာ.. နောင်နောင်ဆိုကြေးစည်လေးထုပြီးလေ..
လေးမ … ငံပြာရည်က အနံ့ပြင်းသလောက်.. မလေး ဟင်းအိုးထဲက သူ့အရသာကိုကြိုက်တယ်..
Comment by မလေး — April 10, 2009 @ 10:34 am
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:07 PM
ကဏ္ဍ : အတွေးအမြင်
ပင်ဂွင်း နဲ့ ဆော်လမွန်တို့ အိမ်အပြန်...
နေရောင်ခြည်က နှင်းဖုံးတောင်တွေပေါ်ကတဆင့် တောင်ပေါ်မြ...